Læticia Hallyday goor dhow ayey ku soo noqotay Faransiiska, fasaxa umusha ee Meghan Markle wuu dhammaaday: dhammaan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Læticia Hallyday goor dhow ayey ku soo noqotay Faransiiska, fasaxa umusha ee Meghan Markle wuu dhammaaday: dhammaan
Læticia Hallyday ayaa dhowaan iman doonta ku laabashada Faransiiska. Sida aad shaaca ka qaaday u dhaw, daabicadiisa jimcaha ee jimcaha '13 September', hooyada Jade iyo Joy waxay ku dhowdahay inay dib ugu soo laabato Marnes-la-Coquette laga bilaabo Talaadada 17 ee Sebtember soo socota. Markan, carmalnimada Johnny Hallyday waa inay joogtaa toddobaad kaliya, kahor intaysan ku soo noqon Mareykanka. Isla goobta, midka riixaya Sébastien Farran in uu ka tago shaqadiisa maareeyaha waa in uu gabagabeeyaa siidaynta DVD-ga fiidiyowga ee Vieilles Canailles, oo loo qorsheeyay bisha November. Digniinta, Sony iyo Universal, guryaha ay iska leeyihiin Johnny Hallyday, Jacques Dutronc iyo Eddy Mitchell, ugu dambayntii heshiis bay gaareen.
Macluumaadka kale ee maalinta waa ku noqo shaqada Meghan Markle. Duchess of Sussex runtii, fasaxa umusha wuu dhammaaday. Khamiista 12 Sebtember, haweeneyda amiirka Harry waxay si rasmi ah u soo saartay ururinta kaabsooshadeeda, Smart Set, oo ay iyadu u abuurtay inay ka caawiso haweenka inay dib ugu soo laabtaan adduunka shaqada. Waxay tagtay saqafka sare ee John Lewis maalintaan weyn weyday oo way ku guuldareysatay inay salaanta si farxad leh ugala soo baxdo dad badan oo xiiseeya safarka. Bilowgii ururinta ururinta, hooyadaArchie Waxay xirtay labis gabar ah: shaati cad oo Misha Nonoo ah, surwaal madow oo Jigsaw ah iyo labo kabood oo jimicsi ah Jimmy Choo. Laakiin waxaas oo dhan waxaa ka dhigay a Casho sharaf Marwo Di.
Sida laga soo xigtay xogta u dhaw, Anne-Elisabeth Blateau waxaa lagu qaadi doonaa sharciga asluubta soo socota bisha Maarso ee soo socota ka dib muranka sakhraannimo.
Tiphaine Auzièreoo difaacaa hooyadiis Brigitte Macron tan iyo weeraradii dawlada Brazil, ayaa waxaa lagu wareystay Balance ton postJimce, Sebtember 13. Ugu dambeyntii, Pierre-Jean Chalençon wuxuu ka hadlay noloshiisa jacaylka buuqa.
C KCS / Bestimage
Laeticia Hallyday goor dhow ayey ku soo noqotay Faransiiska, fasaxa umusha ee Meghan Markle wuu dhammaaday: dhammaan wararkii ka soo baxay 12 sebtember
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/l-ticia-hallyday-bientot-de-retour-en-france-le-conge-maternite-de-meghan-markle-1022411
Sarah Ferguson ayaa argagaxday: Boqoradda Elizabeth II aad ayey u xanaaqday ka dib markii Fergie sameeyay